Waxyaabaha Casriga ah ee Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Waxyaabaha Casriga ah ee Photoshop
David Fuentes | | Tababarada
Madaxa Waxyaabaha Smart ee Photoshop
ka walxaha caqliga badan waa qeyb ka mid ah teknolojiyadda Adobe (laga bilaabo ugu yaraan noocyada CS4 wixii ka dambeeya) halkaasoo fikradda ugu weyni ay tahay tafatirka sawirka aan burburin. In kasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo laga sheego waxyaabaha casriga ah.
Si aan ugu aragno qaab wax ku ool ah sida Smart Objects u shaqeeyaan, waxaan ku sameyn doonnaa tijaabo maalinle ah Photoshop sida cabbirka sawirka. Sawirada muunada ah waxaad ku arki kartaa faraqa udhaxeeya qulqulka shaqada leh walxo caqli leh iyo aan laheyn. Sawirka labaad waxaan ku aragnaa luminta xalinta iyo tusaalaheeda xiga, halka sawirka koowaad, aan aragno sida inkasta oo hoos loo dhigay, la weynaaday, lana yareeyay markale isla markaana la balaariyay isla sawirka, hadana wuxuu sii wadaa inuu ilaaliyo tayadiisa asalka ah.
Sawir Tusaale Ujeeddo Smart
Sawir Degdeg ah
Waxaan horeyba u ogaanay faa'iidada koowaad iyo tan weyn ee tikniyoolajiyadan: ilaaliya xalinta lakabka.
Si loogu badalo lakab shay caqli badan waxaan dooranaa lakabka, midig guji oo dooro xulashada "U beddel shey caqli badan"
Photoshop iyo Sawire si aad ah ayaa loo fahamsan yahay, markaa waxaan sidoo kale ka faa'iideysan karnaa Smart Objects marka aan la shaqeyneyno labadan barnaamij isla waqti isku mid ah. Markaad ka soo guurineysid Sawirqaade oo aan ku dhajineyno Photoshop, waxaa nala weydiiyay sida aan u rabno inaan ugu dhajino waxyaabahaas xulashada ugu horeysa ee muuqataana ay tahay in loo dhajiyo sida walxaha caqliga badan Tani waa hab kale oo lagu hagaajin karo shaqadeena tan iyo markii, si otomaatig ah, isbeddelada lagu sameeyay dukumintiga Sawirka, markii la keydinaayo, isla markiiba laga dhex arki doono dukumiintiga Photoshop ee aan la shaqeyneyno.
Maxay yihiin siyaabaha loogu beddelo lakabka Smart Object? Dhowr.
Midka koowaad, horeyba kor loogu soo sheegay. Guji lakabka na daneeya oo u beddelo Ujeeddo Smart ah.
Midda labaad, oo laga soo qaatay menu-ka Waxyaabaha Lakabka-Smart-U-beddelashada Ujeeddada Smart.
Midda saddexaad, ayaa laga soo qaatay liistada miirayaasha-Ka-beddela miirayaasha caqliga badan.
Kan afraad, wuxuu ka yimid amarka Goobta. Faylka-Meel. Waxaan isticmaali karnaa sawirro ama vector.
Waxaa jira wax kale oo ay tahay inaan ogaano markaan la shaqeyneyno Smart Objects waana taas farqiga u dhexeeya nuqulada lakabka. Haddii aan haysanno shay caqli badan oo aan nuqul ka sameysanno lakabka, waxaan abuuraynaa qolal kala duwan oo lakabkaas ah (wax la mid ah astaamaha ku jira Flash ama Edge Animate). Tan macnaheedu waa in isbeddelada la soo saaray ay ka muuqan doonaan dhammaan nuqulada lakabkaas.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan rabno inaan sameyno isbeddelo aan saameyn ku yeelan lakabka asalka ah, waa inaan isticmaalnaa ikhtiyaarka ah "Shey cusub oo casri ah oo la koobiyeeynayo" ka imanaya macnaha guud (midig guji lakabka). Marka waxaan abuureynaa lakab gebi ahaanba madaxbannaan. Isticmaal labada dhinacba markii loo baahdo.
Miirayaasha casriga ah waa aalad hal abuur weyn. Waxay na siineysaa faa iidada weyn ee ilaalinta xakamaynta miirayaasha lagu dabaqay lakab marwalba, sidaas awgeed awood u leh inay bedesho xuduudaha shaandhada ee su'aasha marka loo baahdo. Si aad u bedesho ikhtiyaariyada miiraha la mariyay, kaliya laba jeer guji magaca shaandhada hoosteeda lakabka oo uu furmo daaqadda u dhiganta. Waa nooc ka mid ah shaqo aan burburin oo na siisa wax soo saar weyn.
Faahfaahin muhiim ah ayaa ah inaan sidoo kale baddali karno waxa ku jira shey caqli badan adigoo si sax ah u riixaya lakabka oo aan doorano xulashadan.
Tani waxay ahayd hordhac kooban oo ku saabsan adeegsiga Smart Objects. Waxaa lagugula talinkaraa inaad nafsad ahaanta u tababartaan sidaasna ku ogaataan fursado cusub shaqo maalmeedkiina Photoshop, idinkoo ku guuleysanaya wax soo saar iyo wax ku ool badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Waxyaabaha Casriga ah ee Photoshop
Retro Weekend: 10 Casharro Saameyn Sare
Tabobar: 5 habab oo lagu sawiro sawiradeena